ကိုယ်ပိုင် Facebook Frame တစ်ခုကို ဘယ်လိုပြုလုပ်မလဲ?? - Myanmar End User
InternetLifestylePC & MobileSocial Media
ကိုယ်ပိုင် Facebook Frame တစ်ခုကို ဘယ်လိုပြုလုပ်မလဲ??
By Myanmar End User October 27, 2017 2657 views
Facebook frame ပြုလုပ်တာ ခေတ်ထနေတဲ့အချိန် ကိုယ် ကိုယ်တိုင်ကလည်း Frame တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီး သုံးတတ်ပြီလား။ ပြုလုပ်ရတာ လွယ်ပါတယ်။ Idea ရှိပြီး ဖန်တီးတတ်ရင် ဖန်တီးတတ်သလို Frame ကောင်းကောင်းလေး ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Facebook frame ကို ပြုလုပ်ဖို့ကတော့ Mobile ကနေ ပြုလုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ Facebook ရဲ့ Mobile view က Support မပေးထားလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်မပူပါနဲ့ Mobile ကနေ ပြုလုပ်လို့ရတဲ့ နည်းလမ်းရှိပါတယ်။
မှတ်ချက် – Mobile ဖုန်းကနေ ပြုလုပ်ချင်သူတွေအနေနဲ့ ပုံတွေကို Touch နဲ့ နေရာချလို့မရတဲ့ ပြဿနာရှိပါတယ်။ ဒါကိုဖြေရှင်းဖို့ ကျွန်တော် စမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာ Mouse အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ Mouse ကို ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့ Cable Mouse ကို သုံးမယ်ဆို OTG နဲ့ တွဲသုံးရမှာပါ။ USB Wireless mouse နဲ့လည်း ရပါတယ်။
ပထမဆုံး လိုအပ်တာတွေကို အရင်ကြည့်ရအောင် –
PC ကနေ ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ Photo Editor လိုပါလိမ့်မယ်။ (ဥပမာ – Photoshop) ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ဖို့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ Mobile ကနေ ဆိုရင်တော့ Image ကို Text ထည့်မယ်ဆိုရင် Image editor တစ်ခုခု သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါကိုတော့ ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျ Application ကို အသုံးပြုပြီး လိုသလို ဖန်တီးယူနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်လုပ်မယ့် Frame အတွက် ပုံတွေ ရပြီဆိုရင်တော့ အောက်ပါ Link ကို သွားပါ။
Mobile ကနေဆိုရင်တော့ အထက်ပါ Link ကို Copy လုပ်ပါ။ ပြီးပါက Browser ကို ဖွင့်ပြီး Link ကို Paste လုပ်ကာ ဖွင့်လိုက်ပါ။ https://m.facebook.com ကို ပြောင်းသွားပါက Browser ရဲ့ Setting မှာ Request desktop size ကို ဖွင့်ပါ။ ဒါဆို အပေါ်က Link ပြန်ပွင့်လာမှာပါ။ Browser မှာ Facebook အကောင့်ကို ဝင်ပါ။
Facebook frame ပွုလုပျတာ ခတျေထနတေဲ့အခြိနျ ကိုယျ ကိုယျတိုငျကလညျး Frame တဈခုတညျဆောကျပွီး သုံးတတျပွီလား။ ပွုလုပျရတာ လှယျပါတယျ။ Idea ရှိပွီး ဖနျတီးတတျရငျ ဖနျတီးတတျသလို Frame ကောငျးကောငျးလေး ဖနျတီးနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Facebook frame ကို ပွုလုပျဖို့ကတော့ Mobile ကနေ ပွုလုပျနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။ Facebook ရဲ့ Mobile view က Support မပေးထားလို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ စိတျမပူပါနဲ့ Mobile ကနေ ပွုလုပျလို့ရတဲ့ နညျးလမျးရှိပါတယျ။
မှတျခကြျ – Mobile ဖုနျးကနေ ပွုလုပျခငြျသူတှအေနနေဲ့ ပုံတှကေို Touch နဲ့ နရောခလြို့မရတဲ့ ပွူနာရှိပါတယျ။ ဒါကိုဖွရှေငျးဖို့ ကြှနျတောျ စမျးကွညျ့တဲ့အခါမှာ Mouse အသုံးပွုလို့ရပါတယျ။ Mouse ကို ဘယျလိုသုံးမလဲဆိုတော့ Cable Mouse ကို သုံးမယျဆို OTG နဲ့ တှဲသုံးရမှာပါ။ USB Wireless mouse နဲ့လညျး ရပါတယျ။
ပထမဆုံး လိုအပျတာတှကေို အရငျကွညျ့ရအောငျ –
PC ကနေ ပွုလုပျမယျဆိုရငျတော့ Photo Editor လိုပါလိမျ့မယျ။ (ဥပမာ – Photoshop) ဒီဇိုငျးပွုလုပျဖို့အတှကျ ဖွဈပါတယျ။ Mobile ကနေ ဆိုရငျတော့ Image ကို Text ထညျ့မယျဆိုရငျ Image editor တဈခုခု သို့မဟုတျ ပေါငျးစပျအသုံးပွုနိုငျပါတယျ။ ဒါကိုတော့ ကိုယျ့စိတျတိုငျးကြ Application ကို အသုံးပွုပွီး လိုသလို ဖနျတီးယူနိုငျပါတယျ။
ကိုယျလုပျမယျ့ Frame အတှကျ ပုံတှေ ရပွီဆိုရငျတော့ အောကျပါ Link ကို သှားပါ။
Mobile ကနဆေိုရငျတော့ အထကျပါ Link ကို Copy လုပျပါ။ ပွီးပါက Browser ကို ဖှငျ့ပွီး Link ကို Paste လုပျကာ ဖှငျ့လိုကျပါ။ https://m.facebook.com ကို ပွောငျးသှားပါက Browser ရဲ့ Setting မှာ Request desktop size ကို ဖှငျ့ပါ။ ဒါဆို အပေါျက Link ပွနျပှငျ့လာမှာပါ။ Browser မှာ Facebook အကောငျ့ကို ဝငျပါ။
အကောင့် ဝင်ထားပြီးသား FBCameraEffects ရဲ့ Home ကို မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ Frame အသစ်လုပ်ဖို့အတွက် CreateaFrame ကို နှိပ်ပါ။ Lightbox အသစ်တစ်ခု ထပ်တက်လာပါလိမ့်မယ်… Start ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
အကောငျ့ ဝငျထားပွီးသား FBCameraEffects ရဲ့ Home ကို မွငျတှေ့ရတာဖွဈပါတယျ။ Frame အသဈလုပျဖို့အတှကျ CreateaFrame ကို နှိပျပါ။ Lightbox အသဈတဈခု ထပျတကျလာပါလိမျ့မယျ… Start ကို နှိပျလိုကျပါ။
Start ကို နှိပ်ပြီးပါက အထက်ပါပုံကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ Upload Art မှ မိမိ အသုံးပြုမယ့် ပုံတွေကို Upload လုပ်ပါ။
Start ကို နှိပျပွီးပါက အထကျပါပုံကို တှေ့ရပါလိမျ့မယျ။ Upload Art မှ မိမိ အသုံးပွုမယျ့ ပုံတှကေို Upload လုပျပါ။
တင်ပြီးသား ပုံများကို မိမိစိတ်ကြိုက် နေရာချပါ… ပုံပေါ်ကို နှိပ်လိုက်ပါက Dropdown တုံးလေး တက်လာပါလိမ့်မယ်။ Dropdown တုံးလေးကို နှိပ်လိုက်ပါက ပုံမှာ မြင်ရတဲ့ Bring forward, Bring to Front တို့ကို လိုအပ်သလို ထားနိုင်ပါတယ်။ အောက်ဆုံးက Shrink with width နဲ့ height ကတော့ ပိတ်ထားတာကို တွေ့ရမှာပါ။ ပိတ်ထားတဲ့အတွက် Screen size တိုင်းမှာ အပြည့်ပေါ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖွင့်ထားရင်တော့ ပုံရဲ့ Size အတိုင်းပဲ Screen မှာ ပေါ်မှာပါ။ ပုံတွေ အားလုံးနေရာချပြီးရင်တော့ Next ကို နှိပ်ပါ။
တငျပွီးသား ပုံမြားကို မိမိစိတျကွိုကျ နရောခပြါ… ပုံပေါျကို နှိပျလိုကျပါက Dropdown တုံးလေး တကျလာပါလိမျ့မယျ။ Dropdown တုံးလေးကို နှိပျလိုကျပါက ပုံမှာ မွငျရတဲ့ Bring forward, Bring to Front တို့ကို လိုအပျသလို ထားနိုငျပါတယျ။ အောကျဆုံးက Shrink with width နဲ့ height ကတော့ ပိတျထားတာကို တှေ့ရမှာပါ။ ပိတျထားတဲ့အတှကျ Screen size တိုငျးမှာ အပွညျ့ပေါျမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဖှငျ့ထားရငျတော့ ပုံရဲ့ Size အတိုငျးပဲ Screen မှာ ပေါျမှာပါ။ ပုံတှေ အားလုံးနရောခပြွီးရငျတော့ Next ကို နှိပျပါ။
ဒီအဆင့်ကတော့ Frame ရဲ့ နာမည်၊ အသုံးပြုမယ့် အချိန်၊ ရှာဖွေရင် ဖော်ပြနိုင်မယ့် စကားစု ကို သတ်မှတ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှာ နမူနာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ သတ်မှတ်ပြီးပါက Next ကို နှိပ်ပြီး ဆက်သွားပါ။
ဒီအဆငျ့ကတော့ Frame ရဲ့ နာမညျ၊ အသုံးပွုမယျ့ အခြိနျ၊ ရှာဖှရေငျ ဖောျပွနိုငျမယျ့ စကားစု ကို သတျမှတျပေးရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ပုံမှာ နမူနာ ကွညျ့နိုငျပါတယျ။ သတျမှတျပွီးပါက Next ကို နှိပျပွီး ဆကျသှားပါ။
ဒီနေရာကို ရောက်ရင် Share as Page ကို နှိပ်ပါ။ Done ကို နှိပ်ပါက Facebook Camera မှာ သာ မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနရောကို ရောကျရငျ Share as Page ကို နှိပျပါ။ Done ကို နှိပျပါက Facebook Camera မှာ သာ မွငျရမှာ ဖွဈပါတယျ။
Share as Page ကို နှိပ်လိုက်ပါက အထက်ပါပုံကို တွေ့ရမှာပါ။ Text မှာ မိမိ ရေးလိုတဲ့ Frame အကြောင်း စာသားကို ပို့စ်လုပ်ရန် ရေးပေးရမှာပါ။ Share မှာ ဖော်ပြရန် Image သို့မဟုတ် Video ဖိုင်တစ်ခုကို Image or Video ကနေ တစ်ခု ရွေးတင်ပါ။ ပြီးပါက Apple effect to image ကို အမှန်ခြစ်ပေးပါ။ Purpose မှာ Use this effect in the Facebook camera ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါ Camera frame အတွက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Add this effect toaprofile picture or video ကတော့ Video နဲ့ Profile picture မှာ သုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးပြီးပါက Post ကို နှိပ်ပါ။
Share as Page ကို နှိပျလိုကျပါက အထကျပါပုံကို တှေ့ရမှာပါ။ Text မှာ မိမိ ရေးလိုတဲ့ Frame အကွောငျး စာသားကို ပို့ဈလုပျရနျ ရေးပေးရမှာပါ။ Share မှာ ဖောျပွရနျ Image သို့မဟုတျ Video ဖိုငျတဈခုကို Image or Video ကနေ တဈခု ရှေးတငျပါ။ ပွီးပါက Apple effect to image ကို အမှနျခွဈပေးပါ။ Purpose မှာ Use this effect in the Facebook camera ဖွဈနပေါလိမျ့မယျ။ အဲဒါ Camera frame အတှကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ Add this effect toaprofile picture or video ကတော့ Video နဲ့ Profile picture မှာ သုံးနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ အားလုံးပွီးပါက Post ကို နှိပျပါ။
Share as Page ကနေ Post ကို နှိပ်ပြီးပါက မိမိဟာ Page admin တစ်ယောက် ဖြစ်ပါက အထက်ပါ Owner box ပေါ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိ Dropdown ကနေ မိမိ သုံးချင်တဲ့ Page ကို ရွေးပေးနိုင်သလို၊ မိမိ အကောင့်ကို ရွေးပေးချင်လည်း ရပါတယ်။ ရွေးချယ်ပြီးရင်တော့ OK ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ နောက်တစ်ဆင့်မှာ Done ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆို သင်ရွေးချယ်ထားတဲ့ Page သို့မဟုတ် သင့် Timeline မှာ Frame ကို အသုံးပြုဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။
Share as Page ကနေ Post ကို နှိပျပွီးပါက မိမိဟာ Page admin တဈယောကျ ဖွဈပါက အထကျပါ Owner box ပေါျလာမှာ ဖွဈပါတယျ။ မိမိ Dropdown ကနေ မိမိ သုံးခငြျတဲ့ Page ကို ရှေးပေးနိုငျသလို၊ မိမိ အကောငျ့ကို ရှေးပေးခငြျလညျး ရပါတယျ။ ရှေးခယြျပွီးရငျတော့ OK ကို နှိပျလိုကျပါ။ နောကျတဈဆငျ့မှာ Done ကို နှိပျလိုကျပါ။ ဒါဆို သငျရှေးခယြျထားတဲ့ Page သို့မဟုတျ သငျ့ Timeline မှာ Frame ကို အသုံးပွုဖို့ အဆငျသငျ့ဖွဈနပေါပွီ။
Try it နဲ့ သုံးနိုင်သလို Profile picture မှာ Add Frame နဲ့လည်း မိမိ ပေးခဲ့တဲ့ Keywords နဲ့ ပြန်ရှာနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် Title နဲ့ ပြန်ရှာနိုင်ပါတယ်။ ဒီဇိုင်းကိုတော့ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်သလို ဖန်တီးပြီး ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Try it နဲ့ သုံးနိုငျသလို Profile picture မှာ Add Frame နဲ့လညျး မိမိ ပေးခဲ့တဲ့ Keywords နဲ့ ပွနျရှာနိုငျပါတယျ။ ဒါမှမဟုတျ Title နဲ့ ပွနျရှာနိုငျပါတယျ။ ဒီဇိုငျးကိုတော့ ကိုယျကွိုကျနှဈသကျသလို ဖနျတီးပွီး ပွုလုပျနိုငျပါတယျ။
Anti Virus, Tools, Service Packs For Ransomware
Password လေး ဖျက်ချင်လို့…
သင့်ကို အသက်ပြင်းပြင်းလေး ရှုစေချင်တဲ့ Pinterest
By Win Thet Oo July 23, 2019 0
ပန်းမန်နဲ့ အပင်စိုက်ပျိုးရေးသမားတွေအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော apps များ
By Win Thet Oo June 21, 2019 0
Xiaomi Company မှ Designer တစ်ယောက်ရဲ့ လက်ရာကို ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ ကူးယူ။
By Win Thet Oo June 18, 2019 0
ခေတ်တစ်ခေတ်ရဲ့ အကူးအပြောင်းနှင့် အလုပ်အကိုင်များ။
By Win Thet Oo June 13, 2019 0
Hackers တွေက သင့်ရဲ့ လူမှုကွန်ယက် data တွေကို ဘယ်လိုရယူနိုင်လဲ။
By Win Thet Oo June 5, 2019 0
Facebook ရဲ့ Newsfeed မှာ Algorithmic Feeds တွေနည်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
By Win Thet Oo June 3, 2019 0
Phone application နဲ့ Website တွေဖြစ်လာဖို့ ဘယ်သူတွေလိုအပ်လဲ။ ဘာတွေလိုအပ်လဲ။ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တာလဲ။
By Win Thet Oo June 1, 2019 0
October 11, 2017 134314 views
October 12, 2017 98432 views
February 24, 2017 50351 views
November 30, 2016 25647 views